April 2022 – Alanzayar
ကမ္ဘာ့အချောဆုံးဘောလုံးဒိုင်ဟုတင်စားရမည့်အပြင် တော်ရုံဘောလုံးသမားဆိုလျှင်ကွင်းထဲမှာsee more…
ကမ္ဘာ့အချောဆုံးဘောလုံးဒိုင်ဟုတင်စားရမည့်အပြင် တော်ရုံဘောလုံးသမားဆိုလျှင်ကွင်းထဲမှာsee more… ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲတွင်ဒိုင်လူကြီး၏အဆုံးအဖြတ်တွေဟာဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကို အားကစားကိုဝါသနာပါသူတိုင်းနားလည်ကြပေသည်။ ယခုအခါတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှ Nong Yingဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာပြည်နယ်လက်ရွှေးစင်ဘောလီဘောသမားတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း ဘောလုံးပွဲ၏ကွင်းလယ်ဒိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အပျော်တမ်းဘောလုံးပွဲများအပြင်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲများတွင်လည်း ဒိုင်အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ဘောလုံးပွဲများတွင်လည်း ချောမောလှပနေသည့်သူမ၏ရုပ်ရည်ဟာ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်သတိထားစရာဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်တွင်တော့ ဘောလုံးပွဲထက်သူမကိုလာကြည့်သူပိုများနေတယ်ဟုသိရပါတယ်။ စာဖတ်သူအနေဖြင့်လည်း ဘောလုံးကန်နေတဲ့အချိန်သူမလိုအချောလေးကဒိုင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလျှင် ဘောလုံးရောကန်နေဦးမှာလား။ Shoon (Cele Daily) Unicode ကမ္ဘာ့အချောဆုံးဘောလုံးဒိုင်ဟုတင်စားရမည့်အပြင် တော်ရုံဘောလုံးသမားဆိုလျှင်ကွင်းထဲမှာဘောလုံးမကန်ဘဲ လိုက်ငေးနေလောက်အောင် …
ယွန်းယွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံကို ခုချိန်ထိ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ စည်သူဝင်း
ယွန်းယွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံကို ခုချိန်ထိ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ စည်သူဝင်း အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ယွန်းယွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံကို ခုချိန်ထိ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ စည်သူဝင်း အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ယွန်းယွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံကို ခုချိန်ထိ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ စည်သူဝင်း အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို …
တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းထူးကြီး see more….
တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းထူးကြီး see more…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းထူးကြီး see more…. တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းထူးကြီး see more…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းထူးကြီး see more…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းထူးကြီး see more…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းထူးကြီး see more…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တစ်ပတ်အတွင်း …
မင်းသမီးလေးလို လှနိုင်လွန်းတဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြလိုက်တဲ့ နေတိုး
မင်းသမီးလေးလို လှနိုင်လွန်းတဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြလိုက်တဲ့ နေတိုး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို မင်းသမီးလေးလို လှနိုင်လွန်းတဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြလိုက်တဲ့ နေတိုး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို မင်းသမီးလေးလို လှနိုင်လွန်းတဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြလိုက်တဲ့ နေတိုး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို …
တူအရီးချင်း တုတ်ဖြင့်ရိုက်သဖြင့် ဦးလေးသေဆုံး
တူအရီးချင်း တုတ်ဖြင့်ရိုက်သဖြင့် ဦးလေးသေဆုံး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲကို မြန်မာနိုင်ငံက လုံးဝ ကျရောက်နေတာပါနော်။ လူသတ်မှု ၊ မုဒိန်းမှု၊ တခြား အမှုပေါင်းများစွာကို ကြားရ ၊ ကြုံရ၊ တွေ့နေရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း အုတ်တွင်းမြို့နယ် ဝါးတီးကျေးရွာတွင် တူတော်စပ်သူ ကိုသက်မှ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးသိန်းဇော်အား တုတ်ဖြင့်ရိုက်ရာမှ နေအိမ်လှေခါးတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသဖြင့် အလောင်းအား ရင်ခုန်သံ …
30/04/2022 မှ ၂၄နာရီအတွင်း မိုးတွေရှယ်ဝုန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသများ
30/04/2022 မှ ၂၄နာရီအတွင်း မိုးတွေရှယ်ဝုန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသများ မင်းကွန်း ခိုတောင် စစ်ကိုင်း မန္တလေး လေမိုး လျှပ်စီးမိုးကြိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 46kA (Angry rourer), Date: 30/04/2022, Time: 01:19:06pm မတ္တရာ လေမိုး လျှပ်စီးမိုးကြိုး Lightning: Cloud to …
မိသားစုလိုက် ဘုရားဖူးသွားကြရာ ယနေ့မနက် (၇)နာရီတွင်……
မိသားစုလိုက် ဘုရားဖူးသွားကြရာ ယနေ့မနက် (၇)နာရီတွင်…… ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အကောင်တောင်ဘုရားတောင်တက်လမ်းမှာ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ကားတစီး ခြောက်ထဲကျပြီး ၃ ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကောက်တောင်ဘုရားကို ဘိလပ်မြေစက်ရုံကလာတဲ့ ကလေးလူကြီးစုစုပေါင်း အမျိုးသား ၅ ဦး အမျိုးသမီး ၆ ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ ကားဟာ မနက် ၇ နာရီကျော်လောက်မှာ တောင်အတက် တဝက်လောက်မှာ …
တရုတ်ကြီးကို စာပို့ပြီး သတိပေးလိုက်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ see more…
တရုတ်ကြီးကို စာပို့ပြီး သတိပေးလိုက်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တရုတ်ကြီးကို စာပို့ပြီး သတိပေးလိုက်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တရုတ်ကြီးကို စာပို့ပြီး သတိပေးလိုက်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တရုတ်ကြီးကို စာပို့ပြီး သတိပေးလိုက်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို တရုတ်ကြီးကို စာပို့ပြီး …
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းမတူမတန်ထည့်ပြောတဲ့ ဇော်မင်းထွန်းကို ပညာသားပါပါ ဖဲ့လိုက်ပြန်ပီ
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းမတူမတန်ထည့်ပြောတဲ့ ဇော်မင်းထွန်းကို ပညာသားပါပါ ဖဲ့လိုက်ပြန်ပီ ဒူးနေရာ ဒူး ၊ တော်နေရာတော် ဒူးနေရာ ဒူး ၊ တော်နေရာတော် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားမှာ “ ဒူး” ဆိုတာ လူ့ခန္တာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒူး ကိုေပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့နန်းတွင်းအစဉ်အလာအရ ဘုရင် ရဲ့ ရှေ့မှာ မူးကြီးမတ်ရာတွေ၊ မြို့စား နယ်စားတွေ၊ …
ဒီလောက်အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး see more…
ဒီလောက်အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဒီလောက်အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဒီလောက်အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဒီလောက်အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဒီလောက်အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဒီလောက်အောက်တန်းကျမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး see more… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို …
အထီးကျန်လို့ဆိုပြီး သီလရှင် ဆရာလေးတစ်ပါး ရတနာပုံတံတားပေါ်ကနေ… See more
စိုးရိမ်စရာနောက်ထပ် ရောဂါဆန်းကြီး ရန်ကုန်မှာစဖြစ်နေပြီသိပြီးကြပြီလား ကူးစက်လွယ်ပါတယ် အထူးကာကွယ်ထားပါ
စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့နာမည်ကြီးသီချင်းကို ဖျက်တယ်လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ နီနီခင်ဇော်
PDF တွေရဲ့ ငွေကို သိန်းရာချီ လိမ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီး